AmaDisco Ahamba Phambili Namaklabhu eNew York | Izindaba Zokuhamba
UMaria Jose Roldan | | ENew York, Ukuzilibazisa
Uma uhlela ukuvakashela eNew York City ngaphezu kokwenza okumelwe ukubonwe phakathi nosuku, kungenzeka ukuthi ufuna yazi impilo yasebusuku yedolobha futhi bajabulele amaphathi abo eNew York.
Idolobha laseNew York libhekwe ngabanama-nightclub ahamba phambili e-United States, ngokuqhathaniswa nalezo eziseMiami, eLos Angeles noma eLas Vegas. Ngokuthile uFrank Sinatra engomeni yakhe iNew York uyibiza ngokuthi "Idolobha elingalali." EManhattan uzothola izindawo ezahlukahlukene ezinjengama-nightclub, imigoqo (yesimanje kanye neyendabuko, njengesiGreki, isiLatini, phakathi kwabanye), imigoqo ye-karaoke, izindawo zokudlela, phakathi kwabanye.
Ufuna ukwazi amadisco namaqembu amahle kakhulu eNew York City? Bhala phansi labo obathanda kakhulu noma abasondele lapho uzoba nehhotela lakho noma indawo yakho yokuhlala, ngoba impela uzofuna ukuchitha izinsuku eziningi kuleli dolobha elimangalisayo ukuze ufunde kabanzi ngempilo yalo yasebusuku.
3 Isibhakabhaka seklabhu
4 Isikhala Ibiza New York
5 Iklabhu Bembe
Le nightclub iseningizimu yeManhattan futhi ithathwa njengenye yama-nightclub amahle kakhulu edolobheni, futhi igama laziwa kahle yibo bonke abantu emhlabeni abathanda ukuzijabulisa ebusuku. Le disco iyingxenye yochungechunge lwamazwe omhlaba, ezinze emadolobheni ahlukene angaphezu kwama-25. Umsunguli wayo nguRicardo Urgell, iSpanishi. IPacha de New York inezitezi ezingekho ngaphansi kwezingu-5, ezinomthamo ukuze abantu abayizinkulungwane ezinhlanu bakwazi ukujabulela ubusuku kule ndawo enhle.
E-Pacha ungajabulela umculo omuhle kakhulu we-elekthronikhi neziphuzo ezihamba phambili nama-cocktails kulo lonke idolobha. Inezinkampani ezinjengeCitigroup, uCalvin Klein, phakathi kwabanye njengamakhasimende ayo ajwayelekile ngakho kuba nguwena nightclub namakhasimende amaningi we-VIP. Igama leklabhu lisho okuthile okufana nalokhu "Phila njengenkosi", ngakho-ke ubumnandi buqinisekisiwe. Phakathi kosaziwayo abaya khona kukhona u-Adriana Lima, Nelly Furtado, Paris Hilton, nabanye. Uma ufuna ukuzijabulisa futhi uhlangane nabantu abadumile futhi uzizwe unjalo, kuzodingeka ukuthi ugcine imali bese uya ePacha.
Le disco eyaziwa nangokuthi yiLa Marquesina, itholakala eManhattan, eduze kombuso wombuso, ingenye yamaqembu abiza kakhulu futhi akhethekile edolobheni. Inomklamo onesizotha nenhle kakhulu, phakathi kwezitebhisi zayo okugqamile. Uma ufuna ukuphuza kule ndawo kuzofanele ulungise i-pocketbook yakho ngoba iyabiza impela, okusho ukuthi, uma ungathandi ukusebenzisa imali ngeziphuzo, kungcono ungayi ebhawa. Ngaphandle kwendawo yokudansa, kunezingxenye ze-disco ezizimele kakhulu nezikude ukuze abantu bakwazi ukuyophumula emdansweni, ukuze babe nesikhathi esisondelene kakhulu lapho bekwazi ukukhuluma ngokuthula. Kwesinye isikhathi kunzima ukungena uma ungekho ohlwini lwezivakashi, okufana nalokho okwenzeka ngeStudio eminyakeni engama-54 edlule.
Izulu liyiklabhu etholakala eMeat Packing District (lapho bekujwayele ukuba khona nezindawo zokuxhela lapho bekugcwele khona inyama), ingelinye lamakilabhu amatasa kakhulu edolobheni. Uke waba ngumnqobi wemiklomelo eminingana efana neBest Club yeClub World Awards 2008. Usebenza kakhulu emculweni we-elektroniki nowe-house futhi unoDJ abahlala bedlala khona. IKlabhu inikela ngezinhlobo ezahlukahlukene zamaqembu inyanga ngayinye, ngalinye linegama elithile. Amagama abo yilawa; Isikhala Esijulile, Izinsuku Zamademoni, Ukudansa Lapha, Manje Izimfihlo Zemihlangano, Izinyathelo Ezinkulu, Isikhathi Sokudlala, Umcimbi Ojulile, Umcimbi Wokuhlanya, iParadizo, iVibal, Izithelo Ezintsha noma Isigaba Sabadala.
Usayizi osondelene nohlelo lomsindo oluhehayo lwenze uCielo waba intandokazi kuma-DJs anamuhla (uFrancois Kervokian, uFrankie Knuckles, uLouie Vega, i-deepdish, uTedd Patterson, noVictor Calderone ukubala abambalwa), Futhi ikilabhu lisemuhle ngenxa yomculo eliba nawo njalo ebusuku ephathini. Ungadinga isimemo sokungena emnyango, okungaba nzima impela.
Isikhala Ibiza New York
Isikhala Ibiza eNew York Itholakala eMidtown West. Yindawo ongeke uphuthelwe ohlwini lwakho ukuvakashela impilo yasebusuku yaseNew York. Yindawo enkulu kakhulu enezitezi ezahlukahlukene, indawo yokuphumula kanye nethala lophahla elinokubukwa okuhle kwe-panoramic kweWest Side. Yindawo enhle ukuchitha ubusuku obumnandi, ngomculo omnandi futhi kwenye yezindawo ezibaluleke kakhulu edolobheni.
El Iklabhu yaseNew York Bembe yindawo enomoya omuhle nobumnandi. Abantu abaya kule kilabhu basesitayeleni esihle futhi abanesizotha, bafuna ukuzijabulisa nje, baphuze, baxoxe futhi bazijabulise. Inabasebenzi abanomusa futhi uzothatheka ngomehluko ongawuthola ekwelashweni kule ndawo, ngoba edolobheni elikhulu kuvame ukwelashwa okubandayo nokude. Ekilabhini yeBembe iqembu aliqali kuze kube phakathi kwamabili, ngakho-ke kungcono ukuthi ubheke indawo yokudlela enhle yokudla kwakusihlwa bese ume ngakule ndawo ukuze udanse uphuze iziphuzo ezimbalwa.
Kukhona okungapheli kwe- izindawo zasebusuku eNew York , ikakhulukazi eManhattan. Kungakho kule ndawo yedolobha uzokwazi ukuthola abantu nganoma yisiphi isikhathi sosuku, kepha futhi nganoma yisiphi isikhathi sasebusuku. Amatekisi eNew York City asebenza ubusuku nemini futhi yonke indawo, ngakho-ke akudingeki ukuthi uthathe imoto noma uqashe imoto uma ufuna ukuzungeza idolobha uneziphuzo. Ungaqiniseka ukuthi amatekisi azokulinda emnyango wegceke.
Wake waya eNew York City? Ngabe uphumile wayazi impilo yasebusuku? Yiziphi izindawo ozivakashele? Yikuphi kubo obukuthanda kakhulu? Sitshele ngesipiliyoni sakho futhi unganqikazi ukwengeza iklabhu noma i-disco ohlwini!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » ENew York » Ama-disco namaqembu amahle kakhulu eNew York
Vakashela indawo ebizwa ngeLa Chflada eQueens, eNew York, iqiniso ukuthi insiza inhle kakhulu, inendawo yokudlela kanye ne-nightclub esiza kakhulu lapho ubuka indawo, ngiyabancoma.